Naya Bikalpa | 'काठमाडौं महानगरपालिकामा गठबन्धन्धभित्र कुनै मनमुटाभ छैन' | Naya Bikalpa 'काठमाडौं महानगरपालिकामा गठबन्धन्धभित्र कुनै मनमुटाभ छैन' | Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७९ बैशाख १९, १३: ४४: २७
नेपाल विद्यार्थी संघबाट पार्टीमा राजनीतिमा उदाहाएका नेता हुन् मुकुन्द रिजाल । उनले विद्यार्थीकालमा नेपाल कांग्रेसले उठाएका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । उनीसँग मानव अधिकार सम्बन्धी काम गरेको अनुभव छ । मानव अधिकारमा रहेर काम गर्दा माओवादी विद्रोहका बेला राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट कसरी मानव अधिकार उल्लंघन भएको थियो भन्ने राम्रो ज्ञान छ । सधैं जनता र पार्टीको कामप्रति दत्तचित्त उनी कर्मठ नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनै नेता मुकुन्द रिजालसँग स्थानीय निर्वाचनसँग केन्द्रित रहेर कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं पुनः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ को अध्यक्षमा प्रत्यासी बन्नुभएको हो ?
हो । म काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ मा पुनः नेपाली कांग्रेसको तर्पmबाट अध्यक्ष प्रत्यासी बनेको हुँ । मेरो मात्रै इच्छा र चाहनाले होइन उठेको हुइन । यस वडाअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नागरिकको माग र आवश्यकता अनुसार म कामनपा १६ बाट पुनः अध्यक्षको प्रत्यासी बनेको हुँ ।
तपाईं नै दोहोरिएर वडा अध्यक्ष हुनुपर्ने कारण के हो ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा यहाँका नागरिकको चाहना हो । त्यसपछि अघिल्लो कार्यकालमा विभिन्न समस्याका कारण हामीले गर्न चाहेका कतिपय कामहरु अधुरा रहे त्यसलाई परिपूर्ति गर्न हो । किन भने हाम्रो देशमा एउटा समस्या छ । त्यो जति अघिल्लो कार्यकालमा जति राम्रो कामको थालनी भएपनि अर्को कार्यकालमा व्यक्ति परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यसलाई थाती राख्ने चलन छ ।
त्यो हुँदा विकासयोग्य धेरै कामहरु धेरै रहेका छन् । हाम्रो अघिल्लो कार्यकालमा धेरै राम्रा कामको थालनी भएको छ । कतिपय पुरा भएका छन्, गर्न बाँकी छन् । त्यो पुरा गर्न पनि यहाँका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधरण नागरिकले तपाईं नै दोहोरिनुपर्छ भन्ने इच्छा राखेकाले नै म पुनः उम्मेदवार बनेको हुँ ।
पाँच वर्षे कार्यकालमा तपार्इंलाई काम गर्न केले छेकेको थियो र ?
हाम्रो मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो स्थानीय सरकार थियो । त्यसको लागि स्थानीय कानुन बनाउनै एक डेढ वर्ष लाग्यो । त्यसलगत्तै विश्व मानव सभ्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गरी कोरोना कहरले मुलुक आक्रन्त बन्यो ।
जनप्रतिनिधिहरु त्यसबाट जनता जोगाउन विभिन्न जनचेतनाका काम गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्री वितरण, राहतवितर जस्ता काममा व्यस्त हुनुपर्दा विकास निर्माणका कामहरु अलमलियो । त्यसका बाबजुद पनि काम गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधिलाई नियमित बजेटभन्दा बाहेक नयाँ काम गर्न महानगर प्रमुख एमालेको भएको र हामी कांग्रेसको भएकाले रोकियो ।
त्यसलाई चिरेर पनि हामीले धेरै काम गर्न सफल भएका छौं । केही दीर्घकालीन विकास निर्माण कामहरु थाती रहेका छन् । त्यो पनि छिट्टै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । त्यसको लागि पनि यस वडाका जनताले मलाई आह्वान गरेका हुन् ।
काठमाडौं विकास निर्माणका खासै काम छैनन् तपाईंका चुनाव जित्ने एजेन्डा के त ?
मेरो खास एजेन्डा भनेको काठमाडौंलाई धुलो, हिलोरहित, वातावरणमैत्री, सुव्यवस्थित, सुशासनयुक्त, सफा, स्वच्छ र हरित शहर बनाउने । त्यसकालागि हरेक टोल–टोलमा सीसीक्यामेरा जडान गर्ने, ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्ने, पार्किङको व्यवस्था गर्ने, बालबालिका, जेष्ठनागरिक र अपाङ्कतामैत्री सडक व्यवस्थापन गर्ने ।
वडा कार्यालयलाई नागरिकमैत्री बनाउने, त्यसको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । वडा कार्यालयबाट हुने जनताका कामलाई छिटो, छरितो र चुस्तदुरुस्त बनाउने । हुने कामलाई ढिलासुस्ती नगर्ने नहुने कामको प्रलोभन नदेखाउने–नपर्ने । दर्ता, सिफारिस जस्ता तत्काल गर्ने । महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कामलाई प्राथमिकता दिनेलगायत छन् ।
तपाईंले त्योसो भनिरहँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनचाहनाअनुसार काम नगरेको गुनासा त छन् नि ?
अरु गाउँ, नगर, वडामा के÷कस्ता गुनासा छन् मलाई थाहा भएन । तर, मेरो वडामा जनताका गुनासा होइन उहाँहरुले ‘तपाईं फेरि यस वडाको अध्यक्षमा आएर हाम्रा सबै समस्याको समाधान गरिनुपर्छ’ भनेर मलाई भनिरहनु भएको छ ।
त्यसकारण पनि म भन्न सक्छु मेरो कार्यकालको परिस्थिति, उपलब्ध साधन स्रोत र बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेको छु भनेर ।
यसअघि महानगरको मेयर एमालेको भएकाले काम गर्न अप्ठ्योरो भयो भन्नुभयो, यसपालि मेयरलगायत सबै वडा जित्नुहुन्छ ?
त्यसमा त संकै छनै ।
यसपालि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरलगायत सबैं वडामा हाम्रो गठबन्धनको जित सुनिश्चित छ । त्यो घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ । पहिला हामी नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा २५ भोटदेखि बढीमा पाँच सयको अन्तरमा धेरै वडा अध्यक्ष हारिएको थियो ।
त्यसमा अहिले गठबन्धनका साथीहरु आइसकेपछि महानगरसहित सबै वडाका सबै साथीहरुको जित सुनिश्चित भइसकेको हामी दावीका साथ भन्न सक्छौं । अघिल्लो चुनावमा हामीले हारेका ठाउँमा ठूलो मतान्तर भनेको पाँच सय हो । अरु वडामा २०, २५, ५० र कतै पाँच भेटलेसमेत हामी पछाडि परेका थियौं । यसलाई आँकलन गर्दा हाम्रो जित भइसकेको खाली मत गन्न मात्रै हो ।
गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टिको बाढी चलेको छ त यहाँ इमान्दारपूर्वक भोट आउँछ भनेर कसरी दावी गर्ने ?
काठमाडौं महानगरपालिकामा गठबन्धन्धभित्र कुनै मनमुटाभ र असन्तुष्टि छैन । यहाँको गठबन्धन इमान्दारपूर्वक चुनावी अभियानमा लागिपर्ने छौं । अबको एजेन्डा भनेको कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ भन्दा आर्थिक समृद्धि हो । अब काठमाडौंलाई विश्वको नमुना शहर बनाउने अभियानमा हामीहरु जुटिसकेका छौं ।
सधैं राजनीतिक क्रान्तिले मात्रै हामीले सोचेजस्तो परिवर्तन आउँदैन । अहिलेको युग भनेको आर्थिक क्रान्तिको हो । त्यसको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतलाई कसरी आर्थिक क्रान्तिसँग जोड्ने भन्ने मूल विषय हो ।
त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा, फुटपाथ, ट्राफिक जामको समस्या, व्यवस्थित शहर र प्रदुषणमुक्त शहर निर्माणका कुराहरु लिएर चुनावी अभियानमा लागेका छौं । यो गठबन्धन खाली चुनाव जित्नका लागि मात्रै होइन । काठमाडौं महानगरलाई विश्वको नमुना नगर बनाउने गरी सुन्दर, प्रदुषमुक्त, हरितयुक्त, वातावरणमैत्री र स्वच्छ, सफा, हराभरा र मानव बस्नयोग्य शहर निर्माणका निमित्त हामीहरुले गठबन्धन गरेका हौं ।
अहिले सरकारी शिक्षालयहरु ओझेलमा परे स्थानीय सरकारले पनि खासै ध्यान दिएनन् भन्ने गुनासो छ नि यसलाई कसरी व्यस्थित गर्नुहुन्छ ?
त्यसको लागि सरकारी विद्यालयहरुको पढाइलाई गुणस्तरीय बनाउने । निजी विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्ने । त्यसबाट सरकारी निजी विद्यालयहरुलाई समान हैसियतको पढाइमा स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय, सीपमुलक र जनउत्तरदायी शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।
यसो भनिरहँदा फेरि सामुदायिक विद्यालयहरु सबै कमजोर छन् भन्न खोजिएको होइन । निजीजत्तिकै राम्रो, व्यवस्थित सामुदायिक विद्यालयहरु पनि धेरै छन् । शिक्षालाई व्यापारमुखी नभएर सेवामुखी बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामीहरु अगाडि बढेका छौं ।
स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवामुखी हुनुपर्नेमा व्यापारमुखी भए भन्ने गुनासो छ के भन्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्य संस्था नितान्त सेवामुखी हुनुपर्छ । सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । पैसा नभएकै कारणले उपचारबाट बञ्चित भएर ज्यान गुमाउन वाध्य हुनुहुँदैन । चाहे सरकार होस् चाहे निजी सबै नागरिकको लागि पहुँचमा हुनुपर्छ । त्यसैले स्वास्थय व्यापारमुखी नभएर सेवामुखी हुनुपर्छ । सबैको पहुँमा हुनुपर्छ । सबैले नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डाका साथ हामीहरु अगाडि बढेका छौं ।
तपाईंको वडा नेपालको पर्यटकीय हब मानिन्छ त्यसबलाई व्यवस्थित गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
नेपालको आर्थिक समृद्धिमा गतिलो खम्बामध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो । त्यसको लागि पर्यटकमैत्री वातावरणको आवश्यकता छ । जसमा शान्तिसुरक्षा, व्यवस्थित पर्यटन गन्तव्य, स्वच्छ, सफा, हरियालीयुक्त वातावरण बनाउन हामी लागिपर्ने छौं । पर्यटन व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउन हाम्रो योदान रहने छ ।
पर्यटकका आकर्षणका केन्द्र भनेको काठमाडौंका पुरातात्विक कला, संस्कार, संस्कृति, रितिरिवाज, मठमन्दिर पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तिनलाई पुनर्संरचना, संरचना र व्यवस्थित गर्ने हामीले प्रण गरेका छौं । होटल व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउन अभिप्रेरित गर्ने छौं । अन्य व्यापार, व्यवसाय गरेर जीवीकोपार्जन गर्नेहरुको लागि पनि लगानीयोग्य वातावरण निर्माणमा लागिपर्ने छौं ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म हामीले जेष्ठनागरिक, एकल महिलालाई मात्रै भत्ताको व्यवस्था गरेका थियौं । अब हामीले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौं ।
कम्युनिस्टले गर्न नसक्ने कांग्रेसले गरेर देखाउने के त्यस्ता काम छ ?
नेपाली कांग्रेस घर बनाउने काम गर्दैन । जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्यो बोल्छ । हामीले विष्णुमतिमा ढुंगा चलाउने कुरा गरेका छैनौं । सपनाको संसार देख्ने परिकल्पना गरेका छैनौ ।
खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने । जसको लागि पुराना पाइपहरुको सरसफाइ तथा पुनर्संरचनाको आवश्यक छ । अहिले काठमाडौंमा चराचुरुङ्गीहरु नबाच्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यो किन भयो भन्दा रुख रोप्ने काम गरिएन । सार्वजनिक स्थलहरुमा भएका रुखहरु सबै काटिए । भएका सार्वजनिक स्थलहरु साँघुरिँदै गए ।
ती पन्छीलाई समेत बस्न योग्य काठमाडौं बनाउने नेपाली कांग्रेसको रहर हो । पशुपन्छी, चराचुरुङ्गीले पानीखाने, बस्ने ठाउँ छैन । तिनको व्यवस्थासमेत काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्छ भन्ने ठहरसहित गठबन्धन गरिएको छ । त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । त्यसको लागि ‘जसको नेतृत्व उसको नीति’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन हामीहरु लागिपरेका छौं ।
काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउने काम करिडोरले गरेको छ, त्यो काम त कम्युनिस्टहरु हामीले गरेको भन्छन् नि त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?
बागमती, विष्णुमति लगायतका शाखा नदीहरुमा करिडोरको निर्माण गर्ने अवधारणा नेपाली कांग्रेसका नेता काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर पीएल सिंहले ल्याउनुभएको हो । पीएल दाइको पालामा पनि म काठमाडौं महानगरपालिकामै थिएँ । त्यसैबेला नदी छेउका सार्वजनिक जग्गामा कोरिडोर बनाउनुपर्ने अवधारणा तत्कालीन मेयर पीएल सिंहले ल्याउनुभएको हो ।
त्यसको व्यवस्थापन हामीले गरेका हौं । त्यो कुरा हामी गौरवका साथ भन्छौं । पहिला काठमाडौंवासीका घर, आँगनलाई सडक बनाइयो, त्यसलाई पीच गरियो । त्यसको विरोध स्वरुप हामीले नदी छेउका सार्वजनिक जमीनको उपयोग गरेर करिडोर बनायौं । काठमाडौंको ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले पीएल दाइको नेतृत्वमा करिडोरको परिकल्पना गरेका हौं ।
त्यही काम अहिले सम्पन्न भएको हो । हामीले थालनी गरेकोबाहेक एककिलोमिटर बाटो बनेको मलाई थाहा छैन । त्यसैले यी काम नेपाली कांग्रेसका नेता पीएल सिंहको पालामा थालनी भएको हो । कम्युनिस्ट साथीहरु आउँदा पनि ती काम निरन्तर भइरहे अहिले पुरा भएका छन् ।
त्यसकारण उहाँहरुले हामी गरेको भन्नुभएको होला । त्यसको सुरुआत पनि हामीले गरेका हौं र सम्पन्न पनि हामीले नै गरेका हौं । बाँकी रहेका ठाउँमा पनि अब कांग्रेसले पुरा गर्छ । सुनधाराको धरहरापनि इन्जिनियर, डकर्मी, सिकर्मीहरुले बनाए तर नाम त भीमसेन थापाको आउँछ नि अहिलेपनि ।
त्यस्तै करिडोर पनि बीचमा ज–जसको सरकार भएपनि परिकल्पना र थालनी पीएल सिंहको हो । उहाँका पालामा थालनी भएका धेरै राम्रा कामहरु त कम्युनिस्ट साथीहरुले लुकाएर राख्नुभएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने अवधारण नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ल्याउनुभएको हो ।
अहिले सम्पन्न भएर काठमाडौंलगायत उपत्यकावासीले उपभोग गर्न योग्य भएको छ । बीचमा आएका वापन्थी सरकारबाट बरु त्यसलाई अलमल्याउने काम भयो । अहिले सञ्चालन भइसकेको छ ।
अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विदेसिने युवालाई नेपालमै रोक्न के गर्नुपर्छ ?
नेपाली कांग्रेसले स्कुल, कलेज खोल्ने काम ग¥यो तर त्यसभित्र व्यापार कहिल्यै गरेन । अब काठमाडौं महानगरपालिकाले नै टेक्निकल कलेज खोज्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ कलेजहरु खोल्नुपर्छ । महानगरीय सहकारी बैंक वित्तिय संस्थाहरु चलाउनुपर्छ । व्यवसायिक शिक्षाको लागि महानगर आफैले सीप मुलुक टेक्निकल विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ ।
त्यसमा नगरवासी युवाहरुलाई निःशुल्क सीपयुक्त तालीम तथा व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा स्वीस सरकारले टेक्निकल इसाइन्स विद्यालय चलाएको थियो । पीएल दाइको पालामा महानगरपालिकाले चलाउनुपर्छ भनेका थियौं ।
त्यसैगरी महानगरपालिकाले अस्पताल खोल्नुपर्छ । काठमाडौैंवासीलाई पाँच भागमा वर्गिकरण गरी आर्थिक अवस्थाअनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । सम्भावनाको खोजीमा विदेशिने युवाहरुलाई काठमाडौंमै रोकेर व्यवसायिक सीपयुक्त शिक्षाद्वारा रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ ।
अहिले नेपालमा बसेर विश्वका कुनाकाप्चामा आइटीमार्पmत काम गर्न सकिन्छ । गाउँगाउँबाट सुन्दर भविष्यको खोजीमा काठमाडौं पसेका युवाहरुलाई मेरो भविष्य, मेरो, घर, मेरो काठमाडौं भन्ने अनुभूति हामीले चुनाव जितेका केही वर्षमा दिलाउँछौं । त्यो काम नेपाली कांग्रेसले गरेरै छाड्छ ।
२०७९ बैशाख १९, १३: ४४: २७
२०५० साल पुस १९ गते तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरण ऐन लागू गरेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली...